Ukuphucula ukuSebenzisana kokuGqitywa kweXesha lokuGqibela nge-Open Cut Library Opener | Ndisuka mac
Ukuphucula ukusebenzisana kokuSikwa kokuGqibela kwe-Pro X kunye noMvulo wokuGqibela weThala leeNcwadi
Isiphelo sokugqibela Pro X sisixhobo sika-Apple sokuhlela ividiyo. Sesona sicelo sevidiyo sigqibeleleyo, ngakumbi nangokuphuculwa okubandakanyiweyo kwinguqulo ye-10.3 kunye nokukhethwa nangabalawuli befilimu ukuhlela iifilimu zabo. Ngendlela efanayo nezinye izicelo zeApple, lonke ulwazi lweprojekthi lugcinwa kumathala eencwadi. Inenxalenye elungileyo, njengokukwazi ukuhambisa iprojekthi ukusuka kwenye iMac ukuya kwenye okanye ukusebenza kwiidrive zangaphandle. Kodwa ngokuchaseneyo, iyakuthintela ekusebenzeni ngokubambisana okanye kwiqela. Kwelinye icala, ngoVulwayo wokuVala oVulekileyo weThala leencwadi sinokusombulula le ngxaki
Ewe, ukusetyenziswa kweArctic Whiteness, kusivumela ukuba siqhubele phambili kule nkalo. Okwangoku, akunakwenzeka okwangoku ukuba usebenzisane nelayibrari ngokubambisana kwaye ube neenguqu ezisetyenziswe ngexesha langempela. Endaweni yokuba uQinisekiso lokuGqibela lweThala leeNcwadi lisibonisa amathala eencwadi akhoyo (umzekelo kwidrive network). Ukuba sifuna ukufumana isibonelelo okanye siqhubeke nomsebenzi weqabane, isicelo siya kwenza ikopi yethala leencwadi.
Singakopa ithala leencwadi, nokuba umsebenzisi uyasebenza ngelo xesha, ngaphandle kokuphazamisa umsebenzi wabo. Enye ingxaki enokuvela yindlela yokwahlula ithala leencwadi lasekuqaleni kwikopi. Umphuhlisi ucinge ngayo yonke into kwaye uphawu lwefayile lwahlukile kunoloqobo. Ukuba uphawu lwantlandlolo lwamathala eencwadi e-FCP X sisikwere esenziwe zizikwere ezi-4, ikopi igcina umbala ofanayo, kodwa kwisimo sebhabhathane. Xa ugqiba umsebenzi, ifayile eyenziweyo iya kucinywa.
Ekuphela kwesidingo sesi sixhobo ukuze sisebenze ngokufanelekileyo kukumisela iilayibrari zakho ngokugcina imithombo yeendaba yoqobo kunye neenqanawa kwiindawo ezahlukeneyo. Ngale ndlela, awutshintshi useto olwenziwe ngumsebenzisi okanye abasebenzisi bangaphambili.
Unako khuphela isicelo kwiphepha lonjiniyela. Njengokuba Inguqulelo yedemo iyafumaneka, ekuvumela ukuba uvavanye eminye yemisebenzi yayo. Ixabiso lesicelo yi- € 19,90, kodwa sikunye I-50% isaphulelo kude kube ngoSeptemba 22, 2017.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ukuphucula ukusebenzisana kokuSikwa kokuGqibela kwe-Pro X kunye noMvulo wokuGqibela weThala leeNcwadi
I-PDF Squeezer kunye ne-Focus Matrix, izinto ezimbini eziluncedo ngexabiso eliphantsi
I-Apple ukuvula ivenkile entsha eLos Angeles